China 110 mhando kraft bepa inonamira mvura jira guruu fekitori uye vanotengesa | DESAY
110 mhando kraft bepa rinonamira mvura jira guruu
Chigadzirwa zita iri 110 mhando polyvinyl doro guruu
Muenzaniso PVA-08 viscosity (MPA.S) 8000-15000
Unyanzvi 0.125L, 0.5L, 0.68L, 1L, 1.3L, 5KG, 10KG, 25KG, 50KG
pH kukosha 6-7
kurapa nguva maminitsi makumi matatu
Solid zvemukati 8%
pasherufu hupenyu hwemwedzi gumi nembiri
Magadzirirwo: 0.125L, 0.5L, 0.68L, 1L, 1.3L, 5KG, 10KG, 25KG, 50KG
Ruvara rwekunze: 0.125L, 0.5L, 0.68L, 1L, 1.3Transparent
Solid zvemukati: 8%
Pasherufu hupenyu: Mwedzi gumi nembiri
1. Chitarisiko: inoonekera viscous mvura, inokodzera ruoko daub uye muchina kushandiswa.
2. Adhesive chivakwa: yakasimba yekutanga adhesion, yakajeka mushure mekusimbiswa.
Iyo inokodzera kusunga zvisina waya uye kubatana kwepepa rakajairwa senge kraft bepa, pepa reA4 uye mabhokisi emakorari. Rinogona kushandiswa otomatiki chemarata katoni rakavhara muchina. Inogona kunama bepa pane roller yeiyo gluing muchina.
1.Prereatment: simbisa pamusoro peiyo yekunamatira yakachena, yakaoma uye isina tsvina.
2 sizing: machira glue muchina, rollers, brushes uye zvimwe zvishandiso zvinofanirwa kuchengetwa zvakachena zvisati zvashandiswa, mushure mekushandisa zvinogona kucheneswa nemvura yakachena.Cloth yekunamatira huwandu i100-200g /㎡.
3.Kurapa: inoda kuputirwa kune rimwe divi, uye nzvimbo yekunamatira yakatsimbirirwa zvine simba nechinhu chinorema. Kazhinji, ichave yekutanga inonamira mushure memaminetsi maviri, uye ichiporeswa mushure memaminitsi makumi matatu.
1. Teerera kufefetedza panguva yekuvaka;
2. Mukuita kwekushandisa, kana ikanamatira kune ganda, unogona kuigeza nemvura;
3. Usadururira iyo glue munzizi uye mapaipi ekudzivirira kusvibiswa kana kuvhara kwetsvina;
4. Usasanganise chigadzirwa ichi nezvimwe zvinonamira, zvikasadaro guruu rinodzikira uye harigone kushandiswa;
5. Mushure mokutora glue, chisimbise munguva kuti usapinde uye ganda. Iyo glue inotora chishandiso inofanirwa kuve yakachena kudzivirira kudzivisa kuunza zvakasviba muhunhu;
Ruvara uye viscosity yechigadzirwa ichi chinoshanduka nekuchinja kwekuchengetedza nguva uye tembiricha. Iyo inzvimbo yepfuma yeglue asi haina kukanganisa glue
Zvadaro: Carton muchina unonamira glue
Yakaderera mutengo Wholesale kraft bepa inonamira mvura jira guruu